IPomsky, i-Triple-A Crossbreed: Iyathandeka, iyasebenza, futhi iyashintshashintsha - Izinhlobo
Uke wezwa ngePomsky? Akunasidingo sokubheka eminye imininingwane ngalokhu kuxubana!
Senze umhlahlandlela osebenzisekayo wakho konke odinga ukukwazi mayelana nePomsky noma ingxube ye-Husky yasePomeranian-Siberian, enye yezinja ezaziwa kakhulu zomklami namuhla.
Siyethemba ukuthi lokhu kuzokusiza ukunquma ukuthi ngabe le hybrid ingumngane ofanele wena.
Inganekwane ye-Intanethi yaphenduka yaba ngokoqobo
Ngabe iPomsky ibukeka kanjani?
Inja encane enobuntu obukhulu
Ngabe uPomsky uzongena kahle kangakanani emndenini wakho?
Uhlobo lomklami, ukugcinwa okuphezulu
Okufanele ukwazi ngaphambi kokuthola iPomsky
Izinkanyezi zomhlaba kaPomsky
Kubiza malini amaPomskies?
Ungathenga kuphi iPomsky
Usukulungele ukujoyina umkhuba wePomsky?
Ngenxa yokuqala kwayo nokuphikisana ekugcineni, abanye abantu basabuza ukuthi ingxube yePomeranian Husky iyiqiniso yini.
Yebo, uPomsky manje usengumklami wangempela ovunyiwe.
Ubuhlanya obuzungeze le hybrid buqale ngo-2009 lapho owesifazane ehlela ukwamukela iPomeranian (Pom) no USuskyan Husky mix ubuze umbuzo mayelana nobumnene bayo esithangamini esiku-inthanethi.
Lapho ebukeza izithombe ze-crossbreed eshiwo, udokotela wezilwane ongabazayo waveza ukungabaza kwakhe ngozalo lwePomeranian yenja.
Abantu ngemuva kwalokho baqala ukuthumela izithombe zalokho okubizwa ngokuthi yiPomskies, okwakuyizinja nje ezincane ezinjengezimpisi.
Ekugcineni, ngo-Mashi 2012, kwazalwa udoti wokuqala kaPomsky onenhloso, ngenxa yemizamo yomfuyi wezinja ovelele UTressa Peterson .
Kungenzeka kanjani ukuxuba iPomeranian encane neHusky enkulu?
Njengoba kunikezwe umehluko wosayizi ePomeranian naseSuskyan Husky, kuyaqondakala ukuthi kungani ukuzalaniswa kwalezi zinja ezimbili kungaphakamisa izingqinamba ezithile zokuziphatha.
Cabanga ngePomeranian yesifazane ethwele imidlwane engusayizi kaHusky - lokhu kuzobeka impilo yakhe engcupheni! Kungakho iningi lama-Pomsky litters lineHusky kamama nePom kababa.
Futhi, ngokusebenzisa izimangaliso zokufakelwa kwesidoda okufakelwayo, abalimi abanomthwalo wemfanelo baqinisekisa ukuthi akukho zinja ezilinyazwa ngenqubo yokuzalanisa.
Ngabe iPomsky ingabhaliswa i-AKC?
Njengoba iPomskies izinja eziklama, iAmerican Kennel Club (AKC) ayizemukeli lezi zinhlobo ezihlukene ukuze zibhaliswe.
Kepha ungabhalisa inja yakho ne-International Pomsky Association (IPA), esebenza ngokulinganisa nokuqashelwa okusemthethweni kwe-AKC kwe-crossbreed.
Kukhona futhi i- IPomsky Club of America (PCA) , enikeza indinganiso yokuba abalimi bathobele, ngokuqinisekisa ukuzalaniswa okufanele kwalezi zinja eziklama.
Yini i-F1 Pomsky?
Isizukulwane sokuqala noma F1 IPomsky kungumphumela weHusky yaseSiberia ehlanzekile kanye nePomeranian emsulwa. Inzalo yesizukulwane sokuqala kumele kube ukuhlanganiswa okungu-50/50 kwezinhlobo zazo zabazali.
Ngaphandle kwesizukulwane se-F1, ungathola futhi i- F1B Pomsky , ekhiqizwa esizukulwaneni sokuqala uPomsky kanye noHusky waseSiberia noma uPomeranian. Ngakolunye uhlangothi, izinhlobo ze-F2 Pom-Husky ziyinzalo yamaFomskies amabili eF1.
Lezi zizukulwane zePomsky zingaba nokubukeka okungafani, kodwa uqinisekile ukuthola inja enhle, epholile noma ngabe ukhetha ini.
Ama-crossbreeds athambekele ekubeni ne- ukubukeka okungalindelekile ngenxa yezakhi zofuzo ezixubekile.
Kufanele uyinikeze abazali bakaPomsky, noma kunjalo: inzalo yabo othandekayo .
Isiphambano saseSiberia seHusky-Pomeranian singathatha ngemuva komunye wabazali bayo; kungaba ibhola elihle lokuthontelana njengobaba walo noma ubuhle obudonsela amehlo njenge-momma yalo.
Lezi nzalo nazo zivame ukubukeka njenge- inguqulo encane yamaHuskies , badla ifa lekhanda lomama wabo nesifonyo.
Abanye bathola ikhala elikhombayo nelide lePomeranian. Lezi zinja zinekhala elimnyama noma elinsundu futhi zivame ukuba nezindlebe ezicijile nezimile.
Iningi lalezi zinhlobo ezivundlile zinayo amehlo amile okwe-alimondi lokho kungaba okuluhlaza okwesibhakabhaka, oluhlaza okotshani, onsundu, inhlaka. Amanye ama-Pomskies ane-heterochromia futhi anamehlo anemibala ehlukene.
Ngokufana nabazali babo, iPomskies ine- ijazi elikabili elijiyile - ijazi langaphansi eliminyene nejazi eliphezulu eliqondile - elihluka ukusuka ebangeni eliphakathi ukuya kwelide. Akunandaba ukuthi ubude buni, amajazi abo alula-athambile futhi aluhlaza.
Izingxube zePomeranian-Husky zingangena ukuhluka kwemibala engaphezu kweyishumi namaphethini, kufaka phakathi imibala ekhanyayo (isiliva, okumhlophe, i-blonde, ukhilimu, onsundu ngokukhanyayo, noma ompunga) nemibala emnyama (i-tan, nsundu, i-orange, obomvu ngoku nsundu, i-orange, noma omnyama) noma ukuhlanganiswa kwemibala.
I-Pomsky enengubo eluhlaza okwesibhakabhaka ( umthombo)
Ukumaka kwabo kungaba ne- iphethini yokuhlangana, okuyijazi elinemibala ehlukene esisekelweni esinombala oqinile, noma i- iphethini yonyawo noma ijazi elinamabala anombala.
Ngaphandle kwamajazi athambile, iningi lalezi nzalo zinemisila egobile, enoboya njengombili iPomeranian neHusky.
Ufuna muphi usayizi - ithoyizi, mini, noma okujwayelekile?
Ithoyizi Pomsky ( umthombo )
AmaPomskies eza ngezinhlobonhlobo zosayizi ohlukile, futhi.
Kodwa-ke, iningi lalezi zinja livame ukuba njalo ngosayizi omncane , ikakhulukazi uma kuqhathaniswa noHusky waseSiberia.
Incane kunayo yonke yeqoqo, ithoyizi uPomsky linesisindo phakathi 5 kuya ku-9 amakhilogremu (2 kuya ku-4 kilograms) futhi ngu- ngaphansi kwamasentimitha ayi-10 (25 cm) ehlombe.
IPomsky encane inesisindo phakathi Amakhilogremu ayi-9 kuye kwayi-18 (4 kuye ku-8 kg) futhi inokuphakama okungaphansi kuka- Amasentimitha ayi-15 (38 cm).
IPomsky encane ingahle ilungele abanikazi abangenalo ulwazi lokuphatha inja yokudlala.
Izinhlobonhlobo ezinkulu zePomsky, inhlanganisela ejwayelekile yePomeranian-Husky ingalinganisa phakathi Amakhilogremu ayi-18 kuye kwangama-25 (8 kuye ku-11 kg) futhi inokuphakama phakathi Amasentimitha angu-15 kuya kwangu-18 (38 kuya ku-46 cm).
Akunandaba ukuthi bangakanani usayizi, amaPomeranian-Huskies anamahlombe abanzi nge umzimba olinganiswe kahle .
Futhi ngeke zihlale zilingana nomdlwane kuze kube phakade. Lezi zinqamlezo ezivame ukuwela zivame ukufinyelela usayizi wazo okhule ngokugcwele lapho zijika unyaka ubudala . Ngakho-ke kungcono ucabangele enye inja uma ufuna leyo ezogcina usayizi wayo womdlwane ngokuba mdala.
Kuthiwani ngeTeacup Pomsky?
I-Teacup Pomskies ifana nezinhlobonhlobo zamathoyizi, kepha eyokuqala ingakhanya njengokukhanya Amakhilogremu ama-3 . Lezi zenziwa kusuka kulokho okubizwa ngokuthi yi-teacup Pomeranians.
Qaphela ukuthola izinhlobo zetiye zokupheka zanoma yiluphi uhlobo, noma kunjalo. Usayizi omncane ngokwedlulele walezi zinja uzenza entekenteke futhi ethambekele ezimeni zezempilo .
Njengoba sishilo ngaphambili, isimo sePomsky sizoba njalo okungaqondakali .
Le hybrid ivame ukuchazwa njengokuningi ukudlala I-Pomeranian ngamandla ashayelwe phansi we-Husky.
Njengoba zombili izinhlobo zabazali zinobuntu obuqinile namahlaya amakhulu, amaPomskies anjalo intando enamandla, ukudlala, nothando . Bavame ukuba nobuhlakani nokuzethemba.
Yiziphi ezinye izici uPomsky angaba nazo?
AmaPomeranian-Huskies ayinqwaba yamandla.
Siyazi vele ukuthi ziyathandeka. Kepha bewazi ukuthi nabo bayasebenza? AmaPomskies athanda ukuba aphumayo futhi abe ne- amandla aphezulu, abalizuza njengefa kuHusky.
Lezi zinja eziphumayo zithanda ukudlala, ukubhukuda, ukunyuka intaba, ukugijima, nokumba, ngakho-ke ungalindeli ukuchitha isikhathi esiningi ubanda ne-Pomeranian-Husky hybrid yakho kusofa.
Futhi ziyizithutha futhi ziyajabula, zinothando lwama-antics. Bheka le vidiyo kaNova the Pomsky ezama ukuthola i-Helmet the Pig ukuthi ayidlale.
Noma ikuphi, noma yisiphi isimo sezulu sihle ngePomsky.
IPomsky iyi ivumelana nezimo kakhulu inja. Zijwayela isimo sezulu esibandayo nesifudumele, ngisho nangamajazi azo awugqinsi.
Lezi zinhlobo ezihlakazayo zizojabula noma ngabe zisendlini enamagceke amakhulu noma efulethini, ngakho-ke zilungele izimo zokuphila ezahlukahlukene .
AmaPomskies angama-fluffballs amnandi amancane.
Lezi nzalo ziyathandana futhi zithanda ukuba yizo maphakathi ukunakwa . Ngokusika kwabo, ngiyangabaza ukuthi kuzoba lula ukungabanaki noma kunjalo.
Izingxube zePomeranian-Husky inobungane kuwo wonke umuntu , ngisho nabantu ongabazi. Uma bethatha okuningi ngemuva komzali wabo wasePomeranian, lapho-ke bazokhetha kakhulu ukuhlala nomuntu oyedwa noma eduze kwabantu abajwayelene nabo.
AmaPomskies anjalo ukwethembeka nokuvikela . Ngaphandle kosayizi wabo omncane, bangaba yinja enhle futhi babe yinja yomndeni ephelele.
Banothando kubantu abajwayelene nabo, kepha kwesinye isikhathi bathambekele ekubeni nezintandokazi.
Bazwana nezingane ngenxa yazo amahlaya . Futhi bayasebenza futhi bayathanda ukudlala, kubenza babe abangane abaphelele bezingane.
Naphezu kwemvelo yabo yokudlala, kungcono ngaso sonke isikhathi ukukwenza unake kubo ukuzungeza izingane, ukwenza nje isiqiniseko sokuthi izingane ezincane azizilimazi noma okuphambene nalokho.
AmaPomskies ngeke abe nezinkinga zokuhlala nezinye izilwane ezifuywayo, ikakhulukazi uma ehlangana nabantu abasha. Uma bedla ifa lomama wabo uHusky ukushayela okuphakeme , noma kunjalo, kungenzeka bathambekele ekujaheni amakati nezinye izilwane ezincane.
Kuzoba nzima kanjani ukunakekela le nja enhle, ehlakaniphile? Ngenxa yoboya bayo obukhulu obumbili namandla alo aphezulu wamandla, ukunakekela iPomsky kudinga umzamo othe xaxa.
Kuzofanele futhi ubeke umcabango othile ekuqinisekiseni ukuthi ingxube ye-Pomeranian-Siberian Husky ithola umsoco owudingayo.
Adla ini imidlwane kaPomsky?
Kungcono ukondla isilwane sakho ukudla kwezinja okuseqophelweni eliphezulu enziwe ngezithako ze-premium. I-kibble eyomile ingaba ngcono ezinjeni ezincane njengePomsky, njengoba ukuthungwa kanzima kwe-kibble kuzosiza ukuhlanza amazinyo abo nokuvikela izinkinga zamazinyo.
Njengoba amanye amaHuskies engavumelani ne-lactose, kungcono gwema ukunikeza imikhiqizo yobisi kuPomsky wakho. Ungabondli u-ayisikhilimu, noma ngabe bacela ngamehlo abo amahle enja ye-puppy!
Uma inja yakho inesisindo esiphakathi kwamakhilogremu angama-20 kuye kwangama-30, yondle Amakholori angama-30 ngekhilogremu ngayinye yesisindo somzimba . Iningi lamaPomeranian-Huskies lidinga ukondliwa 2.5 izinkomishi zokudla kwenja nsuku zonke.
Ungaguqula leli nani ngokususelwe ezingeni lomsebenzi wenja yakho nesisindo. Xhumana nodokotela wezilwane ukuza nokudla okuhle kwesilwane sakho.
Ngabe uPomsky udinga ukuzivocavoca okungakanani?
Yize zisebenza, lezi nzalo azenzi badinga ukuzivocavoca ngamandla .
Bazojabula nge ukuhamba imizuzu engamashumi amathathu ngosuku noma isigamu sehora lesikhathi sokudlala ngemuva kwendlu.
Uma lezi zinja zingawadedeli amandla azo afakiwe, ziyacikeka futhi ziyonakalisa, zikhipha ukukhungatheka kwazo kufenisha yakho noma ezicathulweni zakho.
Njengoba sishilo, ezinye zalezi nzalo zizodla ifa lomama wazo wokuzingela, ngakho-ke kungcono ukusebenzisa i-leash nokhololo lapho uphume uhamba nenja yakho.
Amakhola amancane alingana kangcono imidlwane yePomsky, kepha ungashintshela kufayela le- ukhololo ophakathi nendawo noma omkhulu uma inja yakho isisinda ngaphezu kwamakhilogremu angu-8.
Ukuzivocavoca nsuku zonke kusiza ukugcina iPomeranian-Husky yakho isuka ku- ukuzuza kwesisindo okungenampilo . Lokhu kubalulekile ikakhulukazi ngoba iPom ithambekele ekubeni nama-kneecaps okuxekethile noma i-patellas yokunethezeka, isimo esithuthukiswa isisindo esiningi.
Ngabe uPomskies ukhipha malini?
Impendulo emfushane ithi: okuningi.
Njengabazali babo, lezi zinhlobo ezincane eziwela kancane ziyabhekwa ama-shedders asindayo . AmaPomskies awawona ama-hypoallergenic, ngakho-ke akuzona izilwane ezifuywayo ezilungele abantu abaphethwe yizo komzimba ukuzula.
Tshala imali kubhulashi le-bristle elisindayo (kanye ne-vacuum cleaner) bese uxubha ibhantshi lakho lePomsky okungenani kathathu ngesonto ukunciphisa ukuchitheka.
Uma kuthatha ukulandela umzali wayo wasePomeranian futhi inengubo ende, kuzofanele ukuthi ubhulake ijazi lenja yakho nsuku zonke.
Amathiphu wokulungisa inhlanganisela yePomeranian-Husky
Isikhathi sokugeza kuya ngezinga lomsebenzi wenja yakho. Uma isiphambano sakho sePomeranian neHusky sivame ukungcola ngokudlala ngaphandle, uyigeze njengoba kudingeka .
Gcina engqondweni, noma kunjalo, ukuthi ukugeza njalo kungomisa ijazi lenja yakho futhi kubangele izinkinga zesikhumba .
Ungakhohlwa ukunciphisa iPomsky yakho njalo ezinyangeni ezimbili ukuvimbela uboya babo ekutholeni imiphimbo namata. Futhi ngenkathi ukwenza lokho, izinzipho zabo zigundiwe njalo inyanga .
Ngenxa yegazi labo lasePomeranian, lezi zinja ziyathanda izinkinga zamazinyo . Kungcono xubha amazinyo njalo noma, uma kungenzeka, nsuku zonke.
Bheka ukuthi le nhlanganisela kaPomeranian-Husky ikujabulela kangakanani ukuxubha amazinyo:
Ukuqeqesha i-Pomsky ehlakaniphile
Ngobuntu babo bomzimba nobuntu obukhulu, ingabe amaPomskies anzima ukuwaqeqesha?
Ungakuthola kunzima ukuphatha lezi zinja, ngoba zivame ukuba njalo ezimele futhi inenkani . Lezi izimfanelo abazithola kubo bobabili abazali babo basePomeranian noHusky.
Kunjalo uhlakaniphile futhi unelukuluku lokufuna ukwazi , izimfanelo ezizosiza nge ukuqeqeshwa . Kuzofanele uzibeke njengo- umholi we-alpha ngakho-ke bazolandela imiyalo yakho futhi baziphathe kahle.
Uzokuthola kulula ukukwenza qeqesha umdlwane wakho wePomsky ngokushesha ngangokunokwenzeka. Qala ngokuzijabulisa ne-pup yakho futhi uyethule nomndeni wakho nezinye izilwane ezifuywayo.
Bafundise imiyalo eyisisekelo efana hlala , hlala , futhi woza . Qiniseka ukuthi lungela umvuzo lapho belandela ngempumelelo imiyalo yakho.
Gcina izikhathi zakho zokuqeqeshwa kumnandi futhi kufushane . AmaPomskies athanda izinselelo, futhi azobhoreka uma uqhubeka ubenza benze amaqhinga afanayo.
Impela, iPomsky ingenye yezinja ezinhle kakhulu ozozibona. Izinga layo lamandla elilinganiselayo kanye nemvelo ye-plaufyl nakho kwenza kube yisinqumo esihle sesilwane.
Kepha ngaphambi kokuthi udlulisele imali yakho kumfuyi oseduze, nazi ezinye izinto ngePomsky okufanele uyicabangele.
Lezi zinqamulelayo zingase zithambekele ezimeni eziningi zezempilo.
Njengoba iPomskies iyinja yomqambi entsha, alukho ulwazi olwanele ngezinkinga zabo ezaziwayo zezempilo.
Kodwa-ke, kuphephile ukucabanga ukuthi lezi zinhlobo ezixubile nazo zisengozini yezinkinga zezempilo zabazali bazo.
AmaPomskies athambekele ezinhlobonhlobo ze izimo zofuzo , kufaka phakathi isifo senhliziyo, i-hip dysplasia , futhi izinkinga zamehlo .
Kubazali babo bakaHusky, bangalahlekelwa yi-pigment, ukungezwani kwesikhumba , ukuvuvukala kwamehlo nesikhumba, i-corneal dystrophy, kanye ne-retrophy yangaphakathi eqhubekayo.
I-Pomeranian, ngakolunye uhlangothi, ingadlulisa ukuthambekela kokunethezeka kwe-patellas, i-hypoglycemia noma ushukela ophansi wegazi, ukuqubuka noma isithuthwane , ukuwa komgogodla, i-distichiasis, ne-entropion.
Qiniseka ukuthi uyisa inja yakho kudokotela wezilwane we ukuhlolwa njalo , okuzokwenza ukuxilongwa nokwelashwa kusenesikhathi kwenzeke.
IPomsky enempilo inesikhathi sokuphila se- Iminyaka engu-12 kuya kwengu-15 . Uma ugcina impilo yesilwane sakho, bangachitha isikhathi eside nawe nomndeni wakho.
UPomsky uyingane yama-yappers nabamhlophe.
Kuzoba nomsindo! Ngobaba oyi-yapper nomama ongumuntu okhaliphile futhi okhalayo, iPomskies ijwayele ukuba njalo iphimbo .
Lezi zinja zithanda ukwenza izinhlobo ezahlukene zemisindo . Bangakhonkotha noma bahhewule ukuveza ukukhungatheka noma ukukhathazeka kwabo, njengokuthi uma beshiywe bodwa ekhaya isikhathi eside.
Qiniseka ukuthi uyiqeqeshe kusenesikhathi ukulawula ukukhonkotha ngokweqile kwePomsky noma ukuhewula.
Ukunakekela iPomeranian-Husky akuyona ukuhamba epaki.
Uma ufuna ukubanda, inja ehlehlisiwe engadingi ukunakekelwa okuningi - ungahle udinge ukucabanga kabusha ukuthola iPomsky.
Ngeke sibize lezi zinja ngesondlo esiphansi. Badinga ukuzilungisa njalo futhi ukuzivocavoca nsuku zonke ukuhlala uphilile futhi ujabule.
Uzodinga ukwenza isikhathi sokulungisa umxube wakho wePomeranian-Husky futhi udlale ngawo. Kungokufanayo nangokuqeqeshwa kwabo - ngeke kube lula.
UPomskies uthathe i-Intanethi ngesivunguvungu. Lezi nzalo zaze zakha uhlu lwe-Designer Dogs of America izinja zomklami ezidume kakhulu .
Ngenxa yokubukeka okuhle kwalezi zinja, akumangalisi ukuthi kukhona nezinye eziningi Pomskies odumile ku-inthanethi.
Ngenxa yengubo yakhe entofontofo nokumamatheka okulungele ikhamera, uNorman unabalandeli abangaphezu kuka-100,000 Instagram . Useke wabonakala nakumawebhusayithi amaningi naku-TV.
UMya uPomsky ( umthombo )
Ngobuso bakhe obunolaka nejazi eliwolintshi elifana nelempungushe, uMya uyiPomsky enokubukeka okuhlukile. Her Instagram Ikhasi linabalandeli abangaphezu kuka-44,000.
Unabalandeli abangu-35,000 Instagram futhi ine iwebhusayithi . U-Yuki unegazi elingaphezulu kwe-Pomeranian, ekhombisa okunye ukubukeka okuhlukile kwe-Pomsky.
Umdlwane wePomsky uvame ukubiza phakathi $ 1,000 kuya ku- $ 3,000 ngamunye. Uma ufuna ukubukeka okuthile noma ukhathazekile ngama-bloodline, kungahle kudingeke ukuthi uzungeze $ 5,000 .
Qaphela ingxube yomdlwane wePomeranian-Husky obiza ngaphansi kuka- $ 1,000. Bheka isithunzi somfuyi ngoba lezi zinja azishibhile.
Ungase uzibuze, 'Kungani imidlwane yePomsky ibiza kangaka?'
Iqiniso ukuthi inqubo yokuzalisa ngokuphephile iPomeranian ngeHusky ngokusebenzisa inzalo yokufakelwa iyabiza. Futhi, ukufuneka okuphezulu kwamaPomskies kulezi zinsuku kukhuphula amanani ngisho nangaphezulu.
U-Yuki the Pomsky ( umthombo )
Ngenxa yokwanda kokuthandwa kwalezi zinja eziklama, kunenqwaba yabafuyi abanikela ngamazinyane ePomsky.
Into ebaluleke kakhulu okufanele uyikhumbule lapho ufuna iPomsky yakho entsha ukuthi hlola ingemuva lomfuyi .
Awufuni ukuthenga kumfuyi ongenasimilo noma esigayweni se-puppy.
Hlola injana oyifunayo bese uqinisekisa ukuthi yiyo unamandla, unobungane nabantu abasebenza ngodoti, futhi uyaphendula .
Abafuyi abadumile bazokwazisa nangezinkinga zezempilo ongazilindela, ngokuya ngomlando wezokwelapha wabazali.
Abalimi bamaPomsky kanye nezinja
Naba abanye abalimi abangakunika umdlwane wePomsky owufunayo. Ngokuphepha, hlola kabili ukuthi ngabe abalimi baxhumene nanoma yimaphi amakilabhu noma izinhlangano zePomsky.
IPomsky Northerns (Utah)
I-Apex Pomskies (E-Arizona)
Bheka ukuthi umfuyi owamtholayo une- Ilungu eliqinisekisiwe lebheji lePomsky Owners Association (POA) . Nalu uhlu oluphelele lwe- Abafuyi bePomsky esebenzisana ne-POA.
I-International Pomsky Association nayo ine- uhlobo lwemibhalo yabanikazi e-United States, Australia, Canada, United Kingdom nase-Europe.
Ukwamukelwa nokuhlengwa kukaPomsky
Abanye abantu bayadumala lapho ukuxubana kwabo kwePomeranian-Husky kungakhuli kulokho ababekulindele. Lesi ngesinye sezizathu esikhulu sokuthi lezi zinja ezihluphekayo zigcine sezikhosele.
Uma ungenankinga ukuthatha inja endala , kungani ungazami ukutholwa? Ngomuntu omdala we-Husky-Pom, akudingeki ubhekane nokungaqiniseki kokubukeka nokubukeka kwayo.
Bheka lokhu ukutakula nezindawo zokukhosela IPomskies ilinde nje umnikazi ofanele:
I-Rocky Ridge Pomskies (Idaho)
I-Purebred Pomsky (EMissouri)
Ngefayela le- onothando ubunjalo bePomeranian ne ukudlala kaHusky, iPomsky impela iyinja engumngane omuhle kakhulu.
Uma ungenankinga ukungalindelekile ngokubukeka nangesimo salo, sithi hamba ngakho! Zilungiselele, noma kunjalo, ukuchitha isikhathi esiningi ekuzilungiseni nasekudlaleni ngomxube wakho wePomeranian-Husky.
Ngabe unezindaba noma amathiphu wokuba nePomsky? Baphonse esigabeni sokuphawula. Imibuzo nayo yamukelekile, iphawule ngezansi noma uxhumane nathi.
I-Boxador - Konke Umnikazi Okufanele Akwazi Nge-Boxer Lab Mix
ibukeka kanjani inja ye-heeler ebomvu
I-shih tzu poodle mix ikhule ngokugcwele
i-rottweiler exutshwe nemidlwane yelabhu
ibiza malini imalta yokufundisa